SAWIRRO-Shir looga hadlayo ammaanka badda Puntland oo Garoow ka furmay. – Radio Daljir
Janaayo 31, 2017 5:22 b 0
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta magaalada Garoowe ka daahfuray shirweyne looga arrinsanayo ammaanka badda Puntland.
Shirkaan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda Puntland ayaa waxaa taageeraya urur goboleedka IGAD oo gacan kahelaya midowga reer Yurub.
Mudada uu socdo shirkaani oo dhan saddex cisho ayaa waxaa ka qaybgelaya dhammaan hay’adaha iyo wasaaradaha ay qusayso ee Puntland iyadoona looga doodi doono sidii looga shaqayn lahaa ammaanka iyo horumarka badda Puntland.
Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Eng Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey oo daahfuray shirkaani ayaa uga mahadceliyey EU iyo IGAD taageerada ay siiyeen Puntland, wuxuuna tilmaamay in loobaahan yahay in Puntland lasiiyo gacan dheeraad ah maadaama ay leedahay xeebta ugu dheer Soomaaliya.
Dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in xilligaan howlgalkii ladagaalanka burcad badeedu uu dhammaaday loona baahan yahay in laga shaqeeyo sidii xeebaha looga saari lahaa maraakiibta shisheeyo oo jariif iyo wasakhayn kuhaya xeebaha Puntland.